ABO: Loltootni keenya biyya keessa turan haaluma duraaniin karaa nagaan socho'aa jiru,'' - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoo nageenyaa naannawa daangaa Benishaangul Gumuzii fi aanaalee Oromiyaa ollaa keessatti uumameef dhaabni isaanii akka sababa hin taane dubbii himaan ABO Obbo Toleeraa Adabaa BBC'tti himaniiru.
Ummata Oromoo irratti ajjeechaa fi qe'ee irraa buqqisuun baruma baraan gaggeffamaa jira kan jedhan Obbo Toleeraan, kan karaa Bahaan gaggeefamaa ture waan qabbanaa'e fakkannaan karaa Lixaas jalqabe jechuun balaaleffatan.
Haa tahu malee waliitti bu'insi ammaa kun walitti bu'insa saboota lamaan gidduutti uumame osoo hin taane namootuma mootummaa waliin dhaabbachuun dimokiraasii guddisna jedhanii hiriiraniin kan gaggeefamaniidha jedhan Obbo Toleeraan.
Kun ammoo jijjirama siyaasaa biyya keessatti karaa hedduu dhufaa jiru gufachiisuuf shira hojjetamu tahuu danda'as jedhan.
Kanaafis sababii yoo himan, dhukaasa amma gaggeefamaa jiru keessatti ummanni naannichaa hidhannoo ammayyaa'aa akkas qabaachuus hin danda'u waan taheef jedhu.
Hidhattoota alaabaa ABO qabatantu ajjeechaa qondaaltota mootummaa godina Kamaashii irratti raawwate jechuun ibsa Komishiniin Naannoo Benishaangul Gumuz kenne ilaalchisees, ''Dhaabni ABO duris kan qabsaa ture sirna uummata keenya miidhaa ture irratti malee nagaan uummata keenyaa akka jeeqamu gochuuf miti'' jedhaniiru Obbo Toleeraan.
Kana malees, dhaabni isaanii kabaja mirga sabaa fi sablammoota biyyittii keessaa hundatti akka amanan himuun bu'aa siyaasaa uummata waliitti buusuun argannu hin qabnu jedhan.
Alabaa ABO qabatee kan hidhatee adeemuu hundi miseensa ABOti jechuun hin danda'amu. Sababni isaas maqaa dhaaba keenyaan bakkeewwan hedduutti namootni maallaqa walitti qabanii fi namoota doorsisuun saamicha gaggeesan waan jiraniif, jedhan dubbii himaan ABO.
''Loltootni keenya biyya keessa turan haaluma duraaniin karaa nagaa socho'aa jiru. Humna mootummaa waliinis wal barabaadaa hin jiran.
Isaan bakkeewwan garaagaraatti argamu. Haa tahu malee human mootummaa waliinis tahe qaama kamiyyuu waliin walitti bu'aa hin jiran.
Isaan yommuu mootummaa waliin waliigaltee irra geenyu gara hawwasa tajaajiluutti kan deebi'an taha,'' Jedhan Obbo Toleeraan.
''Bakka qophaa'eefii keessatti gara leenjitti galaa jiru. Ammaaf koree mootummaa fi dhaaba keenyarraa walitti babbaheen haala yeroo ammaa irratti ibsa gabaabaa fudhachaa jiru.
Warri hafan yommuu itti dabalaman gara leenjiitti galuun haala akkamiin tajaajila uummataa keessaatti gama hundaan hirmaachuu danda'u kan jedhu kan leenji'an taha. Loltootni biyya keessa jiran yoo bakki kan gahu tahe itti dabalamuu danda'u. Yoo tahuu baates bakki biraa kennamuufii danda'a'' jedhan.
''Hidhannoo hiikachuun kaayyoo dhumaati jennee hin amannu. Mootummaan qaamoolii jijjirama amma dhufaa jiru kana gufachiisuuf kan socho'anii fi ummmata keenya miidhuuf dhama'an waan jiraniif uummaticha mataasaa iyyuu hidhachiisuu qaba jennee amanna,;; jedhaniiru.
Ta'us karaa nagaa qabsoofna malee akka duraanii waraanaan mootummaa buusna jechuu keenya miti.
Leenjii waraanaa gahaa tahes qabu. Kanaaf mootummaa waliin yommuu walii galtee xumuraa irra geenyu haala akkamiin hojiitti bobba'u kan jedhu murteessuun kan ifa taasifnu taha jechuu dha.''
Hidhannoon qabsaa'uun qabsoo karaa nagaaf gufuu hin tahu?
''Yaadni keenya uummatni keenya diina isa waraanuu fi qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqisu of irraa haa ittisu jenna malee qabsoo hidhannoodhaan itti fufee ejjennoo durii haa qabaatu jechuu keenya miti.
Ammas nageenya uummataa eegsisuun gahee mootummaa qofa waan taheef loltootni keenya waraana uummata keenya irratti baname kana illee irraa ittisuu hin dandeenye. Yoo kana taasifnes dubbichi hammaachuu danda'a jennee amanna jedhan ''Obbo Toleeraan.
ABO'n qabsoo hidhannoo dhaabuun karaa nagaa qabsaa'uuf erga biyya galees sagalee uummataa argachuun haala akkamiin qabsaa'uu akka danda'u irrattis hojii akka eegalanii jiran Obbo Toleeraan dabaluun eeraniiru.
Walitti bu'insa naannoo daangaa Benishaangulii fi Oromiyaa godina Wallagga Bahaa fi Lixaatti uumameenis hanga odeeffannoon kun qindaa'etti kan Wallagga Lixaa osoo hin dabalatiin lakkoofsi namoota qe'eerraa buqqa'uun Wallagga Bahaa keessa qubatanii kuma 72 ol gaheera.
Sagalee 'ABO'n sagantaa siyaasaa isaa hin jijjiiru' - Dr. Shiggux Galataa